सुन्दरी नायिका उर्मिला मातोंडकरका यि धनाड्य पति, ह्याण्डसम मोडल मोहसिनसँग विबाहपछि कता हराइन् उर्मिला ? – Khabarbot
सुन्दरी नायिका उर्मिला मातोंडकरका यि धनाड्य पति, ह्याण्डसम मोडल मोहसिनसँग विबाहपछि कता हराइन् उर्मिला ?
एजेन्सी । भारतीय चर्चित नायिका उर्मिला मातोंडकरले जब ‘चाइना गेट’ फिल्ममा उनले ‘छम्मा छम्मा’ गीतमा धमाकेदार नृत्य गरिन् उनको चर्चा गज्जबसँग चुलियो । ग्ल्यामरको दुनियाँमा आफ्नो जादु छर्न सफल यि सुन्दरीले जवान उमेरमा प्रेम गर्ने बाहेक विबाह गर्ने फुर्सद नै पाइनन् ।
हट सुन्दरी उनी जवानीमा विबह गर्न नभ्याएकी यि सुन्दरीले बुढेसकालमा कश्मीरका मोडल मोहसिन अख्तरको प्रेमलाई विबाहमा परिणत गरिन् । ब्यापारमा गज्जब नाम कमाएका ह्याण्डसम मोहसिनसँग यि सुन्दरीले सन् २०१६ मा विवाह गरिन् ।
विबाह लगत्तै राजनीतिमा हात अघि बढाएकी उर्मिलालाई त्यतिबेला कडा झड्का लाग्यो जब उनी सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा कांग्रेसको टिकट पाएर पनि लज्जास्पद पराजय बेहोर्न बाध्य बनिन् । हाल उनी कलाकारिता र राजनीतिमा पनि त्यति सक्रिय छैनन् ।
सुशान्तकी प्रेमिका रिया फरार भएको प्रहरीको निष्कर्ष, आखिर प्रहरीले नै भेट्न नसक्नेगरी कता लुकिन् रिया ?
शनिबारदेखि राजेश हमालले जातीय विभेदमाथि बहस गर्ने